Lo' (Ingiriis: Cattle) waa xoolo gurijoog ah oo dadku dhaqdaan. Si la mid ah noolaha kale, lo'du waxay u kala baxdaa dibi oo ah lab iyo sac oo ah dhedig. Sidoo kale, lo'du waa xayawaan naasley ah. Taas micnaheedu waa in sacu nuujiyo ilmahiisa.
Sacaha waxa laga maalaa caano la cabo, mar ahaantaana laga sameeyo subag, burcad, yoghurt iyo waxyaabo kale.
Dhinaca kale, lo' labeed oo ah dibida waxaa loo isticmaalaa in beeraha lagu qoto, wax lagu jiito iwm.